HomeWararka CiyaarahaMadaxda Sevilla oo xaqiijiyay in Chelsea ay dooneyso Jules Kounde
Madaxweynaha Sevilla Jose Castro ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa ay dalab ka heshay Chelsea oo ku aadan Jules Kounde xagaagii hore.
Xiddiga reer France ayaa xagaagii oo dhan xiiso u qabay Blues laakiin ugu dambayntii wuxuu sii joogay Spain ka dib markii Chelsea ay diiday inay la kulanto qiimaha Sevilla.
Kounde ayaa la fahansan yahay inuu haysto qandaraaskiisa Sevilla oo lagu burburin karo £ 68m, laakiin madaxweynaha kooxda Castro ayaa daaha ka qaaday in kooxda heysata Champions League ay ka hor istaagtay dalab dhan € 50m (£ 42.5m), oo si dhaqso leh dib loogu soo celiyay.
Isagoo la hadlaya Diario de Sevilla , Castro wuxuu yiri: “Waxaan nahay kooxda labaad ee leh awoodda ugu sareysa ee mushaarka. Waxaa iska cad inaan ka soo baxnay masiibo, sanadkaan, ma jirin fursad kale oo aan ahayn inaan heshano.
Kounde ayaa durba u saftay Sevilla sideed kulan xilli ciyaareedkii 2021-22 wuxuuna dhawaan noqday France Nations oo ku guuleystay Nations League.